ပျံသန်းနေဆဲ ခွပ်ဒေါင်းများသို့ ~ Myo Chit Myanmar
2:29 PM6comments
To The Flying Peacocks by myochitmyanmar
သိပ်ခံစားချက်ပြည့်ဝ ရင်ထဲကလာတဲ့ သီချင်းပါပဲဗျာ။ ကျနော်သိသမျှလူတွေကို ကျနော်ရှယ်ယာလုပ် လိုက်ပါပြီ။ သတင်းဌာနတွေကိုလည်း လွင့်ဖို့အတွက် forwarding လုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ အဓိက အတွင်းထဲက စစ်မှန်သော ဒီမိုကရေစီအတွက် တိုက်ပွဲ
၀င်နေတဲ့ မျိုးချစ်မြန်မာတွေကို နားထောင်စေချင်လို့ပါ။ နောက် သံဃာ့သပိတ်ကံဆောင်ထားကြတဲ့ သံဃာတော် အရှင်သူမြတ်တွေကို သီချင်းရဲ့ ပြည့်ဝတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို ကြားသိစေချင်လို့ပါ။ ခွင့်မတောင်းပဲ အဲဒီလို လုပ်တာတော့ခွင့်လွတ်စေချင်ပါတယ်။
ပျံသန်းနေဆဲခွပ်ဒေါင်းများသို့ သီချင်းအတွက် ဂုဏ်ပြုစာ
ဒီသီချင်းကို မျိုးချစ်မြန်မာရဲ့ဘလော့ပေါ်မှာ တင်ပြီး ၂ ရက်နေမှ ကျနော်နားထောင်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဘလော့တွေပိတ်ထားတာကြောင့်ကျနော်တို့ မှာ ဘလော့တစ်ခုကိုသွားချင်ရင် ၀င်္ကဘာပတ်ရသလိုပါဘဲ ဟိုဘက်ကကျော်လိုက်ဒီဘက်က ခွလိုက်ပေါ့ဗျာ၊ သီချင်းအကြောင်းဘဲ ဆက်ပြောပါမယ် ဒီကအင်တာနက်အကြောင်းကတော့သိပြီးသားမို့မပြောတော့ပါဘူး။
မျိုးချစ်မြန်မာ ကိုယ်တိုင်ရေးပြီးဆိုထားတဲ့သီချင်းမှာ ကျနော်တို့ အတွက် အင်အားတစ်ခုကိုရလိုက်သလိုပါဘဲ၊ သီချင်းကို marching နဲ့ ရေးထားပြီး tempo ကလဲ အနေတော်ပါဘဲ၊ Bb Key နဲ့ mood အပြည့်ကိုယ်တိုင်အားမန်အပြည့်သီဆိုသွားတာကိုနားထောင်ရတဲ့ ဘယ်သူမဆိုမကြိုက်ဘဲ မနေနိုင်ပါဘူး။
ဒီတိုင်းပြည်ရဲ့ မျိုးဆက်သစ်ကလေးတွေ အတွက် အနာဂတ်ဟာ အခုအချိန်အထိလဲ မရေမရာ ရှိနေဆဲပါ၊ ဆွေမနီးမျိုးမစပ်ကလေးတွေ ဆောင်းတွင်းချမ်းချမ်းမှာ တယောက်ကြားတစ်ယောက်ဝင်တိုးပြီး တယောက်ဗိုက်ထဲကအသံတွေတယောက်ကြားနေချိန်မှာ....
ဆွေနီးမျိုးစပ်တွေကတော့ မွေးနေ့ဆိုလဲ အလျှံပယ်၊ မင်္ဂလာဆောင်ဆိုလဲ တရုန်းရုန်းခြိမ့်ခြိမ့်သဲ ကျင်းပနေနိုင်တဲ့အချိန်မျိုးတွေ ဆက်ဖြစ်နေတုန်းပါဘဲ။
ပြီးတော့ ဒီသီချင်းကိုနားထောင်လိုက်ရတာဟာ ............
တတိုင်းပြည်လုံး ပညာသင်တဲ့အရွယ်တွေအများကြီးထဲက ငွေများများပေးပြီးကျူရျင်ထားနိုင်သူတွေရဲ့သားသမီးတွေရယ်၊ ငွေများများပေးပြီး ကောင်းကောင်းကန်တော့နိုင်တဲ့ဂုဏ်သရေရှိလူကြီးမင်းများရဲ့သားသမီးတွေရယ်မှအပ ....
စားစရာတောင်အနိုင်နိုင်ရှာစားရင်း ပလပ်စတစ်ကောက်ရင်းဝမ်းစာရှာဖွေစားသောက်နေရင်းက အယူမတော်မိတဲ့ ပိုက်စုတ်လေးတစ်ချောင်းအတွက်နဲ့ ရဲစခန်းမှာညအိပ်ပြီး အချုပ်သားကျွေးတဲ့ထမင်းဟင်းကို ပလုတ်ပလောင်းစားကြရရှာတဲ့ အရွယ်မရောက်သေးတဲ့ကလေးတွေရဲ့ဘ၀၊
သာမန်လက်လုပ်လက်စား ဘ၀ကိုကျားကန်ရုန်းနေရရင်း တချို့လူသားချင်းမစာနာတဲ့အလုပ်ရှင်ရဲ့အစော်ကားခံရတဲ့ လူလတ်တန်းစားသားသမီးတွေရဲ့ဘ၀၊
ရတဲ့လစာလေးနဲ့ လောက်ငှအောင်ဖြစ်ညှစ်စားသောက်ရင်း အကြွေးသံသရာထဲကမထွက်နိုင်ရှာဘဲ ကျန်းမာရေးအခြေအနေတဖြည်းဖြည်းဆိုးရွားလာတဲ့ မိဘတွေကိုကြည့်ရင်း ကျောင်းကပေးလိုက်တဲ့သင်္ခန်းစာကိုတောင်မှန်အောင်မလုပ်နိုင်တော့တဲ့ ၀န်ထမ်းမိသားစုကလေးတွေရဲ့ဘ၀၊
ဒီဘ၀တွေဘ၀တွေထဲ မှာရုန်းမထွက်နိုင်ဘဲ နစ်ပြီးရင်းနစ်နေကြရတဲ့ကျနော်တို့ ပြည်သူလူထုရဲ့ဘ၀ပေါင်းများစွာတွေအတွက် ရုန်းထွက်နိုင်ဖို့ အင်အားတစ်ခု ဖြစ်စေပါတယ်။
လူကြီးလူကောင်းသားသမီးလေးတွေဘဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကလေက၀ သားသမီးလေးတွေဘဲဖြစ်ဖြစ် နောင်လာမဲ့အနာဂတ်မှာ အခုအချိန်အထိဆက်ပြီး အဖိနှိပ်ခံဘ၀နဲ့ဘဲ နေကြတော့မလားဆိုတာရယ်၊
တကယ်တန်းတိုင်းပြည်က တိုးတက်နေတာလား ဆုတ်ယုတ်နေတာလား ဆိုတာကိုတောင်ရေရေရာရာ ဝေခွဲသိမြင်နိုင်စွမ်းမရှိတဲ့ဒီစစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့လက်ထဲမှာဘဲ ကျနော်တို့မျိုးဆက်တွေတစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက် စတေးခံသွားသင့်သလားဆိုတာရယ်၊
ရသလောက်အင်အားကိုစုစည်းပြီး ရှိသလောက်နည်းမျိုးစုံနဲ့ ပျံသန်းနေဆဲ ခွပ်ဒေါင်းတွေရဲ့နောက်ကနေ အမီလိုက်ပျံသန်းကြဘို့ ကြိုးစားကြမှာလားဆိုတာရယ်နဲ့
ဘာသာ သာသနာကိုတောင် မှန်မှန်ကန်ကန်ထောက်ပံ့ချီးမြှင့်ခြင်းမပြုတော့တဲ့ ကိုယ့်အာဏာတည်မြဲရေးသာလျှင်ရှေ့တန်းတင်နေတဲ့ ဒီစစ်ရာဇ၀တ်ကောင်တွေကို ဆက်တိုက်ထုတ်သွားကြမှာလား ဆိုတာရယ်တွေကို ..........
သယ်ပိုးပေးဝေဆဲ ဗုဒ္ဒအမွေ ခုများတော့ ပျက်သုန်းတော့မယ်ဟေ့….
သီချင်းနားဆင်ရန် သီချင်းစာသားနှင့် chords များရယူရန်
stop hunting new job.
come back to burma.
join with IC.
do and lead for democracy through your spirit, talent,art,....
very professional level, goosebumps, marvelous job. well done.
well done! i'm very impressed.
Now, how do i go about translating the lyrics so they retain the original meaning???
One of the best democracy songs I've ever listened. Thank you very much! I will pass the song to as many Burmese as possible so that they can share the inspiration.